Carlo Ancelotti oo baahiyay xeeladdii uu ku xakameyn jiray Lionel Messi markii uu macallinka u ahaa Real Madrid – Gool FM
Carlo Ancelotti oo baahiyay xeeladdii uu ku xakameyn jiray Lionel Messi markii uu macallinka u ahaa Real Madrid
Haaruun March 21, 2021
(Liverpool) 21 Maarso 2021. Culeyska ay leedahay in la wajaho Lionel Messi ayaa ah mid ay wajahaan macallin iyo ciyaaryahan walba oo isaga ka soo hor jeeda, waxaana macallimiintii isaga ka hor yimid ay la imaanayeen xirfado kala geddisan si ay u xakameyn dhibaatadiisa.
Tababaraha kooxda Everton ee Carlo Ancelotti oo hore macallin ugu soo noqday Real Madrid ayaa dhowr jeer wajahay kabtanka Barcelona kulammada El Classico oo ay wada ciyaaraan kooxaha Los Blancos iyo Blaugrana.
Macallin Ancelotti ayaa hadda daaha ka rogay xeeladdii uu adeegsan jiray markii uu wajahayay Messi iyo sida xiddigihiisa uu uga saari jiray cabsida ay ka qabaan xiddiga reer Argentina.
“Markii aan ku sugnaa Real Madrid oo aan wajaheynay Lionel Messi oo ah mid ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan ee la wajaho marnaba xiddigaha kooxda ma aanan kala hadlin wax ku saabsan isaga haddii kale wey ka cabsan lahaayeen” ayuu yiri macallinka reer Italy.
“Intii aan kala hadli lahaa Messi, waxaan u tilmaami jiray waxyaabo kale, qof walba waa uu garanayaa ciyaartoyda iyo tayadooda, kaliya waxaan farayay xiddigaheyga waxa ay iyaga sameynayaan” ayuu hadalkiisa ku sii daray Ancelotti.
Macallinka naadiga Everton ayaa arintan tusaale uga dhigayay kulankii ay xalay guuldarrada kala kulmeen kooxda Manchester City.
Muxuu Pep Guardiola ka yiri kaddib markii ay Man City u soo baxday Semi-finalka koobka FA Cup?
Xiddig ka ciyaara Premier League oo noqonaya saxiixa ugu horreeya ee Barcelona suuqa xagaaga... (Ma ahan Aguero)